ကိုယ့်တင်ပါးကို ပုရိသတွေသဘောကျတာပျော်တယ် မပျော်ဘူး ခံစားချက်မရှိဘူး။ - Celebrities 8DaysaWeek - Journal
ကိုယ့်တင်ပါးကို ပုရိသတွေသဘောကျတာပျော်တယ် မပျော်ဘူး ခံစားချက်မရှိဘူး။
08 March, 2019, 01:49 PM
Photo-Aung Zaw (Love Space)
Retouch- Nyi Nyi Hla Baw
Stylist-Aung Ko Moe
Make up- April Thuta
ဒီတစ်ပတ် 8days ရဲ့ Cover Star ကတော့ စူစူလို့ ပရိသတ်တွေ ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ အိချောပိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Q . ညီမဖြစ်သူက အနုပညာ ဝါသနာမပါဘူးလား ...
A . သူကတော့ ဝါသနာပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဘက်ကို အချိန် သိပ်မပေးနိုင်ဘူး။ အိချောပို ကိုယ် တိုင်ကလည်း သူ့ကို မလုပ်စေချင် ဘူး။ ပညာရေးနဲ့ပဲ ရပ်တည်စေချင် တယ်။
Q .ဘာလို့ မလုပ်စေချင်တာ လဲ...
A . ပင်ပန်းမှာစိုးလို့ပါ။ အနု ပညာသမားတွေက စိတ်နဲ့ အလုပ် လုပ်ရသလို၊ စိတ်ဒဏ်ရာတွေလည်း အများကြီးရှိတယ်။ သူကအိချောပို ထက် ဝါသနာပါတယ်။ ဇာတ်တစ် ခုခုရရင် သူကအရင်ဖတ်ပြီး အိုက်တင်တွေလုပ်တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင် ကပြောမယ့်ဒဏ်တွေ မခံနိုင်မှာစိုးတယ်။ အိချောလည်း အေးအေးပဲနေတယ်။ ကိုယ့်ကိုလာပြောလည်း မသိချင်ယောင် ဆောင်နေလိုက်တယ်။ သူသည်းမခံနိုင်မှာစိုးတယ်။ တစ်ခါတလေ ကိုယ်တောင်ဒေါသထွက်ရင်၊ မတရားပြောလာတဲ့အခါ ပြန်ပြောလိုက်တာမျိုးရှိတယ်။ သူက စိတ်လည်းဆတ်တယ်။
Q . အိချောဆိုရင် အဝတ် အစားပိုင်းနဲ့ အမြဲ Troll ခံရတဲ့ အပေါ်....
A . ရိုးသွားပါပြီ။ ကောင်းတာပဲ Troll မကောင်းတာဘဲTroll တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု အပြောကခံရ မှာပဲလေ။ လူတိုင်းပါပဲ။ အပြောမှ မလွတ်တာ။ ပြောတော့လည်း ပြောကြတာပေါ့လေ။ အိချောက ကိုယ်ဝတ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာအပိုင်းမှာ ရိုးရိုးပဲ ဝတ်တယ်။ ကာရိုက်တာအရ ဇာတ်လမ်းအရ လိုအပ်လို့ဝတ်ရရင် ဝတ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် ရိုးရိုးပဲ ဝတ်ပါတယ်။ ကြိုက်တဲ့သူ၊ မ ကြိုက်တဲ့သူရှိမှာဘဲ။ ဘောင်လေးအတွင်းမှာ၊ လမ်းကြောင်းလေးအတွင်း မှာ သွားမယ်။
Q . ကိုယ့်အဝတ်အစား ဝတ်တာကို Share ပြီး ဝေဖန်တဲ့ အပေါ်...
A . တစ်ခါတလေကျတော့ အ နုပညာသမားအချင်းချင်း၊ အနု ပညာသမားလို့ ပြောလို့ရလား၊ မရ လားတော့ မသိဘူးပေါ့နော်။ ဒါက လည်းဘာကြောင့်လဲမသိဘူး။ ဘယ် သူဘယ်ဝါမှန်းတောင် မသိဘူး။ သူ များလာပြမှ Fan တွေပြမှ သိတာ။ ကိုယ်ကတော့ ကိုယ်ဖော်ဝတ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာအတွင်းမှာ ဝတ်မယ်။ Brand ကိုလည်း ကိုယ်ဝတ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာအတွင်းမှာပဲ ဝတ်မှာပဲ။ မျိုးစုံပြောကြတာ သူတို့အပိုင်းပဲ။ အိချောကတော့ မပြောချင်ဘူး။
Q Gym ဆော့တာ မတွေ့ရ တာက...
A Gym တော့ မဆော့ဖြစ် ဘူး။ တစ်ခါမှ မဆော့ဖူးဘူး။ အချိန် မပေးနိုင်လို့ပါ။ အချိန်ပေးနိုင်ရင် ဆော့မှာပါ။ ဒါက ကျန်းမာရေးအ တွက်ရော၊ အသားအရေအတွက်ပါ ကောင်းတယ်လေ။ အသက်ကြီးလာ ရင် အချိန်ပေးရမှာပေါ့။ အိချော ခန္ဓာကိုယ်က တက်လွယ်ကျလွယ်ဆိုတော့ အချိန်မပေးနိုင်ရင် ပုံပျက် သွားမှာစိုးလို့ပါ။ အဓိကက အစားနဲ့ပဲ ထိန်းတယ်။ လမ်းတော့လျှောက် တယ်။